सीमा विवादः भाषणको प्रसंसा गर्नुभन्दा संस्थागत प्रकृयामा जान दबाब दिउँ « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
सीमा विवादः भाषणको प्रसंसा गर्नुभन्दा संस्थागत प्रकृयामा जान दबाब दिउँ
प्रकाशित मिति : २०७६, ४ मंसिर बुधबार १०:२९
पुष्पकमल दाहालले ईण्डियासँग लड्ने भनेर सुरुङ खनाए । शान्ति प्रकृयामा आईसकेपछि राष्ट्रियताका लागि ईण्डियासँग युद्ध लड्ने भाषण ठोके । बाहिर धर्ती हल्लाउनेले भित्र के गरेका रहेछन् ? सुरुङ खानाउनुभन्दा पहिले दिल्लीमा विन्तीपत्र हालेका रहेछन् । राष्ट्रियताका लागि ईण्डियासँग युद्ध लड्ने भाषण ठोक्नुभन्दा पहिले लुकेर सात पटक ईण्डियन दूतावासमा हाजिर भैसकेका रहेछन् ।
केपी ओलीले कालापानीबाट ईण्डियन फौज हटाईने भाषण गरे । भाषणप्रति विरोध छैन तर नाकाबन्दीको बेला देशभक्ति उरालेर सरकार बनाएपछि ओलीको अनुहार नेपाली नागरिकहरुले राम्ररी हेरेका छन् । भाषणमा त शेरबहादुर र बाबुराम पनि भनिदिएका छन् । जनता प्रयोग गर्नु पर्दा उराल्ने भाषणलाई हाईहाई गर्नुभन्दा संस्थागत निर्णय प्रकृयाका लागि दबाब दिनु उचित छ ।
कालापानीको मामिलामा अहिले अमरेशकुमार जतिको राष्ट्रवादी को छ ? मोदीलाई खुईल्याउने रअ को रणनीतिले उनलाई चर्को राष्ट्रवादी बनाएको छ ।
मोदीको विरोधलाई वितण्डावादको उपमा दिने बाबुराम जतिको देशभक्त अहिले को छ ? तीन बर्षसम्म धाएर पनि रअ ले दिएको ट्युटीलाई अनुमोदन नगरेर उत्तानो बनाईदिएको मोदीप्रतिको झोंकले उनलाई राष्ट्रवादी बनाएको छ।
यस्ता फाल्तु मानिसहरुको चटके अभिनयबाट जोगिन सकेनौं भने ईण्डियन र पश्चिमाहरुले आफ्ना एजेन्टहरुको पुच्छर समात्न लगाएर आकाशमा पुर्याउँछन् र आशाको उत्कर्षपछि दलालहरुलाई साईजमा ल्याएर नेपालीहरुलाई ’कसैबाट केही पनि हुन्न’ भन्ने ठाउँमा पुर्याएर निराश बनाउँछन् । अहिलेसम्म विदेशीहरुले यसैगरी नेपालीहरुलाई संगठित हुन रोकेका छन् ।
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई कोरोना सङ्क्रमण भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।
भीम रावल, घनश्याम भुसाललगायतलाई भोट नहाल्न भन्दै ओली पक्षद्वारा पर्चा वितरण
चितवन । नेकपा एमालेमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि चितवनको सौराहस्थित होटल सेभेन स्टारमा